चुनावको समयमा गरेका वाचा पुरा नगरेको भन्दै मेयरलाई ट्र’कमा बाँ’धेर घि’सारियो ! – Life Nepali
चुनावको समयमा गरेका वाचा पुरा नगरेको भन्दै मेयरलाई ट्र’कमा बाँ’धेर घि’सारियो !
काठमाडौं । मेक्सिकोको दक्षिणी भागका एक मेयरलाई ज’बरज’स्ती एक पिकअप ट्र’कमा बाँ’धेर स’डकमा घि’सारेको घ’टनामा ११ जनालाई गि’रफ्तार गरिएको छ । मेयर जर्ज लुइस एस्कन्डोन हर्नाडेजलाई केही परसम्म तानेपछि स्थानीय प्रहरीहरुले जोगाएका थिए । समाचारहरुका अनुसार मेयरलाई ठू’लो चो’ट भने लागेको छैन । प्रारम्भिक रि’पोर्टमा मे’यरमाथि किसानले आ’क्रमण गरेको बताइएको छ । किसानहरुले नै यस अघि पनि एस्कन्डोनमाथि आ’क्रमण थिए । चु’नावको समयमा मेयरले आफूहरुसँग गरेको वाचा अनुरुप स्थानीय सडक मर्मतको नगरेकोले यस्तो कदम चालिएको किसानहरुले बताएका छन् ।
अहिले चिएपास राज्यस्थित उक्त गाँउमा अ’तिरिक्त सु’रक्षाकर्मी तै’नाथ गरिएको छ । एस्कन्डोनले प’क्राउ परेकाहरुमाथि ज्या’न मा’र्ने प्र’यास वा अ’पहरण गर्ने प्रयासमा मु’द्दा दा’यर गरेका छन् । मेयर कार्यालयबाहिर रहेका एक प्रत्यक्षदर्शीले खिचेको भिडियोमा पुरुषहरुको एक समूह मेयरलाई ज’बरज’स्ती कार्यालयबाहिर निकालिरहेको र त्यसपछि बाहनमा बाँधेको देखिन्छ । एक सीसीटीभी फुटेजमा ट्रकको पछाडि हा’तमा डो’री बाँ’धेर उनलाई स्यान्टा रीटाको सडकमा ता”निदैं गरेको देखिन्छ । दजनौँ प्रहरीले केही समयको प्रयासपछि मेयरलाई घिसार्दै अघि बढेको वाहनलाई रोक्न सफल भएका थिए ।
प्रहरी र मेयरलाई घि’सार्दै अघि बढेका पु’रुषबीच भएको झ’डप पनि भएको थियो । त्यसक्र’ममा कयैन घाइ’ते भएको खबर छ । यस अघि पनि चार महिना पहिले, एक घ’टनामा एक समूहले कार्यालयमा नभएको समयमा तो’डफो’ड गरेका थिए । त्यो समय मेयर कार्यालयमा थिएनन् । एस्कन्डोन आफै पनि चु’नावको समय प्रहरीको गि’रफ्तारीमा परेका थिए । ला’स मार्गरिटासमा मेयर चुनावको दौरान प्र’तिद्व’न्दी उम्मेद्वारका समर्थकहरुसँग भएको एक वि’वादमा जोडेर उनलाई प’क्राउ गरिएको थियो । तथापि, प्रमाणको अभावमा उनलाई मु’क्त गरिएको थियो ।-एजेन्सी
Previous सी भ्रमणअघि तिब्बती श’रणार्थी ध’माध’म प’क्राउ!
Next चिनियाँ राष्ट्रपति सी भन्छन ! सम्पतिको लोभ गर्नेहरुले कम्युनिस्टको राजनीति गर्न सक्दैन।